Life – 9han News
ရုပ်ချင်းဆင်တဲ့သူတွေက အချစ်ရေးပိုအဆင်ပြေပြီး ရေရှည်ခိုင်မြဲကြကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
ကံတရားဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့မရသလို အချစ်ရေးကံဆိုတာလည်း ဘယ်လိုမှ မှန်းဆလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖူးစာဆိုတာကိုတော့ လက်မခံလို့မရပါဘူး။ ပြီးတော့ လူတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာရှင်နဲ့ရုပ်ချင်းတူကြတယ်၊ ရုပ်ချင်းဆင်တဲ့သူတွေက အချစ်ရေးမှာ ပိုပြီးခိုင်မြဲကြတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆလေးလည်း ကြားဖူးပါတယ်။ ဒီအယူအဆလေးမှန်လားလို့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့ စိတ်ပညာဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Dr. Jitka Lindová နဲ့အဖွဲ့သားများက လေ့လာမှုတွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါ ဒီလိုမျိုးတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ပထမဆုံးအချက်က လူတွေရဲ့
အပြင်ပန်းက ကြံခိုင်မာကြောသလိုနေနေပေမယ့် အတွင်းစိတ် နူးညံ့တဲ့ ရာသီခွင် (၃)ခု
(၁၂)လရာသီခွင်တွေထဲမှာတော့ တူညီတဲ့ စရိုက်တွေနဲ့ ရာသီခွင်တွေ ရှိကြသလို သိပ်ကို ကွဲပြားကြတဲ့ ရာသီခွင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ထိုအထဲမှာမှ ဒီရာသီခွင် (၃)ခုကတော့ အများအားဖြင့် အပြင်ပန်းက ကြံ့ခိုင်မာကြောသယောင် ပြုမူနေထိုင်တတ်ကြပေမယ့် အတွင်းစိတ်ကတော့ သိပ်ကို နူးညံ့ကြပါတယ်။ (၁) Sagittarius (Dec 17 – Jan 20) ဓနုရာသီဖွားတွေက အများအားဖြင့်
လုပ်ငန်းခွင်မှာ လူလေးစားခံရတဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် (၅)ချက်
အမျိုးသမီးတွေကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ အာဏာပြအနိုင်ကျင့်တာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်ခံရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေကို ကြားဖူး ကြမှာပါ။ ဒီလိုပြဿနာတွေ ကတော့ လုပ်ငန်းခွင်တော်တော်များများမှာ အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို ဖြစ်နေ၊ ကြုံနေကျ ကိစ္စတစ်ခုလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုက ဒီလိုကိစ္စ တွေနဲ့ ကြုံလာရင် ထုတ်မပြောပဲ နှုတ်ဆိတ် နေကြတာ များပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာမှားပါတယ်။ ဒီလို
ကဲကဲ ပထမဆုံး တဈကိုယျတျောပြျောရှငျနသေော Single လေးမြားဆောရီးပါလို့။ ခေါငျးစဉျကိုက ခဈြသူနဲ့ခရီးသှားတဲ့အခါလေ ခဈြသူရှိတဲ့သူတှေ လကျမထောငျလိုကျတော့။ ဒီနပွေ့ောပွပေးခငျြတာက ခဈြသူနဲ့ခရီးသှားတဲ့အခါမှာ အဓိကအကဆြုံး ပွသာနာအတကျအမြားဆုံး ကိစ်စတဈခုရှိပါတယျ။ ဘယျအကွောငျးအရာ ဖွဈမယျလို့ထငျလဲဗြ။ သူနဲ့ခရီးသှားတာ သတျကွတာတလမျးလုံး အားကုနျတယျ တျောပွီ သူနဲ့နောကျဘယျတော့မှ မသှားတော့ဘူး။ နောကျတဈခါနငျငါနဲ့မသှားနဲ့ဟေ့ ကငျမရာမနျးချေါသှား ကွားလား။ အဲ့တာပါပဲ အဓိက တကျကွတဲ့
သားကို အရှက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား အသက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား လွမ်းရေးကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား ပြောပါ မေမေ
အမိမဲ့သား ရေနဲငါး သွေးမပျက်ပါ အမေ ပေးရက်တာ အမေ့ဆန္ဒ သံသယ ဆိုတာမထားပါရစေနဲ့တော့ သားဟာ အမေ့သားပါအဖေထားခဲ့တာ အမေပါ အမေထားရက်တာ သားပါအမေသားကို.. အရှက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား? အသက်ကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား? လွမ်းရေးကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား? ဝမ်းရေးကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလား?နားလည်ပါရစေ အမေ နို့ဘူးထဲက နို့ချိုရည် အမေ့နို့ မဟုတ်မှန်းသားသိတယ်…နူးညံ့စွာထွေးထားတဲ့လက် အမေ့လက် မဟုတ်မှန်း
Sensations from someone who checks his or her spouse’s phone
One of the couples who picks up the phone and checks in on the suspicion, According toasurvey of psychologists, 34% of men and 62% of men
When most people try to find out why they are scared and run away
It isapleasure to love someone. It may seem likeafun feeling, but it’savery dangerous situation. Because the more you love, the better. It’s
Is it possible to leave the monastery after hellfire?
Can it beahell ofatime if you leave the gift at the end of the day? If you do not want to ask the teacher,
The time of the Buddha was the golden pot of gold
The way the Buddha taught the Buddha In the choice of the time of the abbot, the day is divided between the good times and the bad times.
It wasagreat time for my mother and father to be with me
It wasagreat time for my mother and father to be with me This isapicture ofamonk who was carrying his own body and